မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးအွန်လိုင်းဈေးကွက် Zego Bird Application ဆော့ဝဲလ်မှတစ်ဆင့် အိမ်တိုင်ရာရောက်ေ? - Yangon Media Group
မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးအွန်လိုင်းဈေးကွက် Zego Bird Application ဆော့ဝဲလ်မှတစ်ဆင့် အိမ်တိုင်ရာရောက်ေ?
နေပြည်တော်၊ သြဂုတ် ၁၁ – မြန် မာပြည်သူများအတွက် ဖုန်းတစ် လုံးရှိရုံဖြင့် ကမ္ဘာတစ်ဝန်းရှိစက်ရုံ နှင့် နိုင်ငံခြားအရောင်းဆိုင်ကြီးများ မှ အရည်အသွေးမြင့် ဈေးနှုန်းမှန် ခေတ်မီပစ္စည်းများကို နိုင်ငံခြားတိုင်း ပြည်များသို့ ဈေးဝယ်ထွက်စရာမ လိုဘဲ တိုက်ရိုက်ဝယ်ယူနိုင်ရန်အ တွက် Zego Bird Company မှ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံး အွန် လိုင်းဈေးကွက် Zego Bird Application ဆော့ဖ်ဝဲမှတစ်ဆင့် ဈေး ဝယ်ယူနိုင်သည့် ကုန်ပစ္စည်းမိတ် ဆက်ပွဲအခမ်းအနားကို နေပြည် တော်ပျဉ်းမနားမြို့ မင်္ဂလာရှမ်းကန် ခန်းမ၌ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
အဆိုပါအခမ်းအနားဖွင့်ပွဲနှင့် ကုန်ပစ္စည်းမိတ်ဆက်ပွဲတွင် နိုင်ငံ ကျော်အဆိုတော် Rဇာနည်နှင့် နိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်ဗီဒီယို သရုပ်ဆောင် အေးမြတ်သူတို့ လာရောက်ဖွင့်လှစ် ၍ ယင်းဈေးကွက်မိတ်ဆက်ပွဲသို့ လာရောက်သူပရိသတ်များအား အမှတ်တရလက်မှတ်ရေးထိုးပေးခဲ့ ကြသည်။
နိုင်ငံကျော်ရုပ်ရှင်ဗီဒီယို သရုပ် ဆောင်အေးမြတ်သူက ”လူတိုင်း ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းထဲမှာ Zego Bird Application ရှိနေမယ်ဆိုရင် နိုင်ငံ ခြားမြေခြားရေခြားတွေ အဲဒါမှမ ဟုတ်ဘဲနဲ့ ပြည်တွင်းမှာတောင် တ ခြားနေရာတွေမှာ သွားနေစရာမ လိုတော့ဘဲ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ထွက် ကုန်တွေအားလုံးကို ကိုယ့်ရဲ့အိမ် မှာထိုင်နေပြီးတော့ ဒီ Zego Bird Application သုံးရုံနဲ့ အိမ်တိုင်ရာ ရောက်လာပြီးတော့ ပို့ဆောင်တဲ့ Application မိတ်ဆက်ဖြစ်ပါ တယ်။ အဲဒီလိုပို့ဆောင်တဲ့နေရာ မှာ ပစ္စည်းဈေးနှုန်းကဈေးကြီးသလားဆိုတော့ ဈေးမကြီးပါဘူး။ တ ကယ်လက်ရှိရောင်းနေတဲ့ဈေးနှုန်း စက်ရုံဈေးနှုန်းတွေနဲ့အတူ ဝယ်ယူ လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်”ဟု ပြောသည်။
Zego Bird Company မှ မန်နေးဂျင်းဒါရိုက်တာ ဒေါ်ဝါဝါ က ”ဒီပွဲကဆော့ဖ်ဝဲ Application မိတ်ဆက်ပေးတာပါ။ ဒါက မြန်မာ တစ်နိုင်ငံလုံးအနှံ့ပါ။ ဘယ်နေရာ မဆို ကျွန်မတို့ရဲ့ ဒီ Zego Bird ဆော့ဝဲလ်ကို အကောင့်ဖွင့်ပြီးတာ နဲ့ ငွေဖြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် တစ်နိုင်ငံလုံး အနှံ့မှာ GPS နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ အတွက် ဗApplication အကောင့် ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဝယ်ယူမယ့်နေရာ ကို ဖော်ပြလိုက်တာနဲ့ နီးစပ်ရာအေး ဂျင့်ဆိုင်မှာ ကျွန်မတို့ Zego Bird အေးဂျင့်ဆိုင်တွေရှိပါတယ်။ အဲဒီ အေးဂျင့်မှာ ငွေသွားဖြည့်၊ ဆော့ဖ် ဝဲထဲကို ငွေဖြည့်ပြီးသွားတာနဲ့ အစ်ကိုတို့လိုချင်တဲ့ လူသုံးကုန်၊ အိမ် သုံးကုန်အကုန်လုံးကို ဒီဆော့ဖ်ဝဲ ထဲကနေတစ်ဆင့် အိမ်မှာနေရင်း သက်သောင့်သက်သာ ဈေးဝယ်လို့ ရပါတယ်။ ကျွန်မတို့ဆီမှာ ငွေဖြည့် ခပေးစရာမလိုဘူး။ ကြိုက်တဲ့ငွေ Amount ကိုထည့်၊ ငွေဖြည့်လို့ ရပါတယ်။ ဈေးဝယ်မယ့်ဆိုင်နေရာ ကို အကောင့်ဖွင့်လိုက်တာနဲ့ ဖုန်း နံပါတ်ကနေရာအကုန်လုံးပါပြီးသား ပါ။ နေပြည်တော်မှာ ဆိုင်ခွဲတွေအ နည်းဆုံး ခုနစ်ဆိုင်ရှိပါတယ်”ဟု ဒီ မိုကရေစီတူဒေးသို့ ပြောသည်။
ဘဏ်ချေးငွေဆပ်ရန် ကျန်နေသည့် ရခိုင်မှတောင်သူများကို ဥပဒေအရ အရေးယူသွားမည်ဟုဆို
ကျောက်တော်မြို့တွင် ရခိုင်အမျိုးသားပါတီ လူငယ်တွေ့ဆုံပွဲ ပြုလုပ်
ပီတာမိုက်ကယ် ဒေးဗစ်ဆန် အံဆုံးသွား နုတ်နေစဉ် ၎င်းနှင့် စေ့စပ်ထားသည့် အေရီယာနာဂရင်းဒီ အနားတွင် ?
ဗြိတိန်နိုင်ငံက ဥရောပပါလီမန် ရွေးကောက်ပွဲတွင် ပါဝင်မည်
ယာဉ် မတော်တဆမှုများတွင် ဆိုင်ကယ်ပါဝင်မှု လျော့နည်း ကျဆင်းရေး တစ်နေ့နှစ်ကြိမ် အသိပညာပေးလျက်ရ
ဖားကန့် နွံကန်ပြိုကျမှု အလောင်းတစ်လောင်း ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပြီး ပျောက်ဆုံးနေသူ ၄၇ ဦးစလုံး သေ?
တရားမဝင် နိုင်ငံခြားသားများကို နိုင်ငံတွင်းမှ ထွက်ခွာရန် ကြေညာပြီး ဖမ်းဆီးနေမှုကြောင့် မြ??
ချောင်းသာတွင် ၁၂၆ မဂ္ဂါဝပ်အထိ ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မည့် လေအားလျှပ်စစ်လုပ်ငန်း လုပ်ကိုင်ရန် တရုတ